Fandroahana mpiasa tsy ara-drariny: manome fe-potoana 72 ora ny sendikàn’ny Jirama | NewsMada
Tsy manaiky ny fanaparam-pahefana mandroaka mpiasa tsy ara-drariny intsony ny farimbon-tsendikàn’ny mpiasa. Handray fanapahan-kevitra hentitra izy ireo raha tsy misy ny fanovàna ataon’ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena.
Tsy rariny intsony! Tsy manaiky lembenana amin’ny fandroahana mpiasa tafahoatra ataon’ny mpitantana ny Jirama ny farimbon-tsendikàn’ny mpiasa. Nambaran’ireo mpitondra tenin’izy ireo, omaly, fa tsy rariny ary tsy azo ekena intsony ny fihetsika sy ny fepetra raisin’ny mpitantana ity orinasam-panjakana ity, satria tsy hita soritra ny fanajana ny zon’ny mpiasa, ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahan’ny sendikà, izay faritana sy arovan’ny Lalàmpanorenana eto Madagasikara. Be loatra ny fandroahana mpiasa tsy ara-drariny ato amin’ny orinasa, ka manome fe-potoana 72 ora izahay, handraisan’ny fanjakana sy ny tompon’andraikitra fepetra. Hiditra amin’ny dingana mafimafy kokoa izahay raha tsy mahazo fahafaham-po”, hoy ihany izy ireo.
Maro ny tranga hita sy fantatry ny sendikà. Singanina amin’izany ny mpiasa iray, nandray anjara tamin’ny tolona, nidina an-dalàmbe, ny volana avrily 2018 teo ireny. Naka fanomezan-dalana tsy hiasa (conge) ilay mpiasa tamin’ny voalohany, ary nangataka indray taty aoriana, saingy tsy nomen’ny mpitantana ny orinasa intsony. Nangatahana fanazavana ary nampiakarina filankevi-pifehezana (conseil de discipline) izy rehefa niverina niasa.
“ Tsy azo roahina”, hoy ny mpanara-maso ny asa
Nangatahana ny hevitry ny foibe mpanara-maso ny asa, ary nangatahan’ity farany ny hampihaonana ilay mpiasa sy ny mpitantana ny Jirama, saingy tsy nipoitra mihitsy ity farany. Namoaka fanapahan-kevitra ny mpanara-maso ny asa avy eo, fa “tsy azo roahina ity mpiasa ity”. Saingy noroahin’ny mpitantana ny Jirama ihany ilay mpiasa, ny 6 novambra teo. Nandefa taratasy tamin’ny alalan’ny vadi-tany tany amin’ny mpitantana ny Jirama ny sendikàn’ny mpiasa, saingy tsy nisy valiny. Nampandre izany tany amin’ny sampana mpanara-maso ny mpiasa indray ary nandefasan’ity farany taratasy fampiatoana (lettre de mise en demeure) an’ilay fandroahana ny mpitantana ny Jirama, milaza fa “tsy azo roahina ilay mpiasa ary tokony hiverina handray ny asany”. Tsy namoaka valiny hatrany anefa ny mpitantana ny orinasa, ary nalefan’ny foibe mpanara-maso any amin’ny fitsarana ny raharaha, ankehitriny.
Alaina amin’ny kitapombolan’ny orinasa
Tranga hafa koa, ny fandroahana mpiasa solontenan’ny mpiasa ao anaty sendikà. Namoaka fanapahan-kevitra koa ny sampana mpanara-maso ny mpiasa fa tsy azo roahina ity mpiasa ity. Ankoatra ireo, nisy koa ny fandroahana tsy ara-drariny ny talen’ny mpitantana ny mpiasa (DRH) tao amin’ny Jirama. Nitory ity farany ary nahazo rariny, ka nandoa volabe ho azy ny Jirama, vola nalaina tao amin’ny kitapom-bolan’ny orinasa. “Izany hoe, lasa vesatra ho an’ny orinasa indray ny fanapahan-kevitra tsy rariny raisin’ny mpitantana”, hoy ireo mpitondra tenin’ny farimbon-tsendikàn’ny mpiasa.